JIOLAHY TAO AMBANJA : Voafira antsy sy naratra mafy ny tompon-trano, lasa ny lavanila manta milanja 200Kg
Ianjadian’ny tsy fandriam-pahalemana andro aman’alina ireo mponina miaina ao amin’ny Distrikan’ Ambanja iny hatra-min’ izao. 12 mars 2019
Miloa-bava ary manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana izy ireo mba hikatsaka vahaolana satria tsy manana fiarovan-tena, no sady tsy afaka manohitra ireo olon-dratsy ny ankamaroany. Hany ka manjakazaka izay tsy izy ireo jiolahy miriaria manao ny asa ratsy eny amin’ ny manodidina. Ny halatra lavanila manta no tena ahafantatarana ny faritra Avaratra, indrindra fa ny ao Ambanja.
Raha ny tatitra voaray omaly teo am-panoratana ny lahatsoratra, tao amin’ny fokontany Antsahampano no tonga nanafika ireo jiolahy miisa folo mitam-basy miaraka amin’ny zava-maranitra ny alin’ny alatsinainy hifoha talata lasa teo. Avy hatrany dia nandrahona sy namono ireo olona tao an-trano moa ireto mpanafika tamin’io fotoana io. Vokany naratra mafy avokoa ilay tantsaha tompon-trano sy ny fianakaviany. Voafira antsy tamin’ ny lohany sy ny tanany ilay voalohany ary tapaka mihitsy ny rantsan-tanany roa tamin’ny tanany havia. Etsy andanin’izay lasan’ireo jiolahy ny lavanila mbola maitso milanja 200 kg tao anatin’ny gony miisa 6 ka tafaporitsaka izy ireo nony avy eo. Ireo naratra nandritra ny fifanjevoana nalefa hopitaly haingana. Ny Polisy kosa mandray an-tanana ny fanadihadiana ny raharaha.
Nahitana sarety nitondra lavanila manta
Adiny iray taorian’ity fanafihana ity tokony tamin’ny 2 ora maraina dia nisy saretin’omby nitondra lavanila maitso tao anaty kitapo miisa 3 hitan’ireo olona sasany tao amin’ny fokontany Antsahampano ka avy hatrany nampandre ny polisy. Tsy ela akory ireo mpitandro filaminana dia tonga tao an-toerana. Voatazona ao amin’ny biraon’ny polisy hatreto ny sarety sy ireo lavanila. Naneho ny hatezerany anefa ny fokonolona ka mitaky ny hanolorana azy ireo ny olona nitondra ilay sarety saingy nambaran’ny kaomiseran’ ny polisy ao Ambanja fa tsy nisy olona voasambotr’izy ireo.
Tsy maintsy ho fantatra kosa hoy ity farany ny tompon’ny omby nitarika ilay sarety sy ny tompon’ity farany ka hanamora ny asan’izy ireo amin’ny fikarohana ireo jiolahy mpanafika. Andrasana arak’izany izay mety ho valin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy any Ambanja mikasika ity fanafihana mitam-piadiana ity.
Tatianà R. sy A.Lepêcheur.